ဖန်တီးမှုရတနာဒီဇိုင်း၏အနုပညာ - အောင်မြင်မှုပုံပြင်များမဂ္ဂဇင်း
Tsveta Trendafilova နှင့်အတူအင်တာဗျူး
ဤပြဿနာ၌ငါသည်သင်တစ်ဦးသည်အလွန်အမင်းပါရမီမိန်းမငယ်ကိုတင်ပြ။ ဝိဇ္ဇာအမျိုးသား School မှာသူမ၏အလယ်တန်းပညာရေး "ပါမောက္ခပြီးသွားတဲ့နောက် Vesselin Stoyanov "သူမရှိလေ့လာနေသူမ၏ပထမနှစ်တွင်စဉ်အတွင်း .. ခရီးသွားလာရေးအဆိုပါကောလိပ်အတွက်ကျောင်းအပ်ရန်သူမ၏လှုံ့ဆော်သူ၏သူငယ်ချင်းနှင့်အတူအလုပ်လုပ်ရန် Varna, ဘူလ်ဂေးရီးယားသွားသူမကဘာစီလိုနာအတွက်အလေ့အကျင့်လုပ်ဖို့တတ်ပုံကိုမသိ အများကြီးဒီခရီးစဉ်သူမ၏ဘဝကိုပြောင်းလဲစေ, သူရှိသူမ၏အိမ်နှင့်အနာဂတ်ကိုတွေ့လိမ့်မည်ကြောင်းပါလိမ့်မယ်။ နှစ်အနည်းငယ်အကြာတွင်သူမအဘို့လက်ဝတ်ရတနာ၏အဓိကဒီဇိုင်နာဖြစ်လာ ဖက်ရှင်အမှတ်တံဆိပ် Stradivariusနှင့်ယနေ့ခေတ်သူမ၏အမည်စက်မှုလုပ်ငန်းအတွက်လူသိများသည်နှင့်အမြဲတမ်းသူမ၏အကြီးအခွက်တဆယ်နှင့်ကျွမ်းကျင်ပိုင်၏အဆင့်မြင့်နှင့်ဆက်စပ်နေသည်။ 2014 ခုနှစ်တွင်သူမပင်သူမ၏ကိုယ်ပိုင်ဖန်တီး လက်ဝတ်ရတနာအမှတ်တံဆိပ် နှင့်များ၏စာဖတ်သူများနှင့်အတူမျှဝေဖို့ငါနှင့်အတူပါကဒီမှာယခု အောင်မြင်မှုပုံပြင်များ သူမ၏အောင်မြင်မှုလမ်းကြောင်းကိုအကြောင်းကိုမဂ္ဂဇင်းနည်းနည်းပို။ သူမ၏အမည်အား Tsveta Trendafilova ဖြစ်ပါတယ်။
သငျသညျဘာစီလိုနာအဘို့ကျန်ကြွင်းရစ်သောအခိုက်အထဲကနေ start ကြပါစို့ - သင်နေဖို့နှင့်မည်သို့သင်လက်ဝတ်ရတနာဒီဇိုင်းပန်းချီကနေသင့်ရဲ့အနုပညာပါရမီပြန်လည်အာရုံစိုက်ဒါကြောင့်ဖြစ်ပျက်ခဲ့ဘူးလုပ်ဘာလဲ?
မှန် CT-Varna ၌ငါ့ပထမနှစ်တွင်စဉ်အတွင်းသူတို့ကကျွန်တော်တို့ကိုစပိန်အတွက်အလေ့အကျင့်ကိုကမ်းလှမ်းခြင်းနှင့်ငါတက်သည်လက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့ခဲ့ကတည်းက စပိန်ဘာသာစကားသင်တန်း ကျောင်းတစ်နှစ်ကာလအတွင်းကျွန်မသွားနှင့်ကဘယ်လိုမြင်ပိုကောင်းဘာသာစကားသင်ယူခြင်း၏အားသာချက်ယူရန်ဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်။
ဒါဟာငါ့အ College မှလည်းသူ (ငါနှင့်ငါ့လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်တွေနဲ့အလွန်ကျေနပ်သူ, ငါတို့အလုပ်လုပ်ကိုင်ရာဟိုတယ်ပိုင်ရှင်, ဆောင်းဦးရာသီရောက်သဖြင့်လည်းအချိန်ကိုပြန်သွားဖို့အထိဤအလေ့အကျင့်အတွင်းမှာငါငါ့အနာဂတ်ခင်ပွန်းတွေ့ဆုံခဲ့ကြောင်း, ဒါကြောင့်ဖြစ်ပျက် ), ကိုသူ့အဘို့အလုပ်နေဖို့ကျွန်တော်တို့ကိုကမ်းလှမ်းခဲ့သည်နှင့်ကျွန်တော်လျင်မြန်စွာပြုလုပ်ဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်။
လအနည်းငယ်အကြာတွင်ကျွန်မနေဆဲလေ့လာဖို့ဆက်ပြီးချင်သောဆုံးဖြတ်ချက်တစ်ခုလုပ်များနှင့်အဆင့်ဒီဇိုင်းကိုလေ့လာပြန်ကြှနျုပျ၏မူရငျးစိတ်ကူးမြို့သို့ရောက်လေ၏။ ဒါနဲ့အဘို့အစီအစဉ်ကိုစာရင်းသွင်း အဆိုပါ UACE ဘာစီလိုနာအတွက်အနုပညာဒါရိုက်တာ (တက္ကသိုလ် de las Artes Cinematograficas y က Escenicas က de ဘာစီလိုနာ) ။
ကျနော်တို့ဘာလို့လဲဆိုတော့ငါ့အ husband`s အလုပ်၏ဘာစီလိုနာအနီးငယ်လေးတစ်မြို့မှာအသက်ရှင်ဖို့သို့ပြောင်းရွှေ့ခဲ့သည်။ တူညီသောမြို့မှာတော့ဇိမ်ခံပစ္စည်းများနှင့်လက်ဝတ်ရတနာ Tous များအတွက်စပိန်အမှတ်တံဆိပ်၏ဌာနချုပ်ဖြစ်ပါတယ်။ တစ်နေ့တော့ကျွန်မအလုပ်သင်ရတနာအဘို့မိမိတို့အလုပ်ကြော်ငြာကိုဖြတ်ပြီးသညျ လာ. အကြှနျုပျသအနေအထားလျှောက်ထား၏ရုတ်တရက်စိတ်ကူးတယ်။ ငါကလက်ဝတ်ရတနာကုန်ထုတ်လုပ်မှုအဖြစ်ကို manual ယာဉ်ဖြစ်, အနုပညာနှင့်အတူအနီးကပ်ထိတွေ့အတွက်ဖြစ်ခြင်းအများကြီးလွဲချော်။ သူတို့ကငါကောင်းတစ်ဦးအထူးကုခဲ့ကြောင်းဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်နှင့်ချက်ချင်းငါ့ကိုငှါး၏။ ထိုသို့တစ်ဦးအလုပ်အကိုင်သို့လှည့်ဖို့နဲ့နေ့စဉ်နေ့တိုင်းက ပို. ပို. စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းကိုရှာဖွေငါ့ကိုသိပ်စိတ်ဝင်စားလိမ့်မည်ဟုခန့်မှန်းမရှိဘဲလက်ဝတ်ရတနာတွေနဲ့ကျွန်မရဲ့ပထမဦးဆုံးထိတွေ့စတင်ခဲ့သည်။ Tous အတွက်ငါနည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာ features တွေလေ့လာသင်ယူပြီးတစ်နှစ်အကြာတွင်သူတို့ကဒီဇိုင်းဌာနကိုမှငါ့ကိုမပြောင်းရွှေ့ဘယ်မှာ Jewel မှာအလုပ်သင်အနေဖြင့်, ယနေ့ငါသိ၏အခြေခံခဲ့ကြသည်ရသောအလုပ်မှာအမျိုးမျိုးသောလုပ်ငန်းစဉ်များ, ရှောက်သွားလေ၏။
သငျသညျ Stradivarius များအတွက်အဓိကလက်ဝတ်ရတနာဒီဇိုင်နာဖြစ်လာခဲ့သည်နိုင်အောင်ဘယ်လိုဖြစ်ပျက်ခဲ့တာလဲ
ဒီမှာဖက်ရှင်စက်မှုလုပ်ငန်းန်ထမ်းများအတွက်ဒါဟုခေါ်တွင် headhunters မှတဆင့်စုဆောင်းလျက်ရှိသည် - စပိန်နှင့်ဥရောပအခြားနိုင်ငံများတွင်ဖက်ရှင်အမှတ်တံဆိပ်များအတွက်ကိုယ်စားလှယ်လောင်းရှာကြံအတွက်အထူးပြုဖြစ်ကြောင်းကုမ္ပဏီများမှရှိပါတယ်။ Tous အတွက်နှစ်များစွာကြာပြီးတဲ့အခါမှာသူတို့သညျငါ့ကို Parfois မှာမကြာမီ Stradivarius မှာနောကျတခုဆက်စပ်ပစ္စည်းဒီဇိုင်နာအဖြစ်အလုပ်ပူဇော်ဖို့ကျွန်မကိုခေါ်လေ၏။ Stradivarius အတွက်အဆိုပြုချက်ဟာရတနာစုဆောင်းခြင်းများအတွက်အပြည့်အဝတာဝန်ယူခဲ့ပါတယ်နဲ့ကျွန်မချက်ချင်းဆုံးဖြတ်ခဲ့ပါတယ်။
တစ်ခုလုံးကိုလက်ဝတ်ရတနာစုဆောင်းခြင်းများအပြင်၌သင်တို့လည်းဆံပင်ဆက်စပ်ပစ္စည်း, နေကာမျက်မှန်နှင့်ရေကူးဝတ်စုံစုဆောင်းခြင်းများကဲ့သို့ Stradivarius များအတွက်ဒီဇိုင်းများကိုတခြားအမျိုးအစားများကိုပွုပါပွီ။ သငျသညျအဘယျအသင့်ရဲ့ဖန်တီးမှုအကြောင်းသင့်စိတ်အားများအတွက်စိတ်ဝင်စားစရာအကောင်းဆုံးဒီဇိုင်းဘယ်မျိုးဖြစ်သနည်း
ငါ Stradivarius အတွက်နှစ်ပေါင်းတစ်လျှောက်လုံးဆက်စပ်ပစ္စည်းအမျိုးမျိုးတို့ကိုပြုပေမယ့်အလွန်ရှေ့ဦးစွာ မှစ. ငါမည်သူမဆိုအဆိုပါလက်ဝတ်ရတနာတွေနဲ့ရှုပ်ထွေးဖို့ခွင့်ပြု didn`t, haha, ငါ့တာဝန်ကြီးကအဆုံးအထိဤလမ်းရှိနေဆဲဖြစ်သည်။
ကြီးမားသောနိုင်ငံစုံကုမ္ပဏီများတွင်အလုပ်လုပ်ကိုင်ထက်ပိုမိုဆယျနှစျပွီးနောကျ, အလွတ်တန်းသွားသည့်သဘာဝနောက်ဆက်တွဲအချို့ကိုမျိုးဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာသင်ဆုံးဖြတ်ဘယ်တော့မှကြောင့်သိပ်စဉ်းစားနေမိလျှင်, အချိန်တစ်ချိန်ကယူသင့်ကြောင်းဆုံးဖြတ်ချက်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။
ငါနေ့၏အလင်းမြင်ကလွယ်ကူခဲ့တယ်ဘယ်တော့မှအသစ်တစ်ခုစီမံကိန်းကိုပူးပေါင်းကမ်းလှမ်းခဲ့သည် Stradivarius ၌ငါးနှစ်ကြာ - ဒါပေမယ့်ငါ့အမှု၌ကံကြမ္မာငါ့ကိုအနည်းငယ်ကူညီပေးခဲ့သည်။
အဆိုပါစီမံကိန်းကိုဖျက်သိမ်းနှင့်ကိုယ့်ကြီးမားတဲ့ကုမ္ပဏီတွင်အလုပ်လုပ်ကိုင်ပြန်မသွားပေမယ့်ငါ့ကိုယ်ပိုင်ဖန်တီးရန်ကြိုးစားရန်မဟုတ်ဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြသည်။ ငါအဘို့အလုပ်မလုပ်အတော်ကြာအဓိက clients များရှိသည်။ ဖိအားနှင့်သရုပ်ြပအောက်မှာငါ့ကိုစောင့်ရှောက်ဖို့လာမယ့်သေးငယ်စီမံကိန်းများကိုလည်းအမြဲရှိပါတယ်။ သီးခြားစီငါသည်လည်းလက်ဝတ်ရတနာများငါ့ကိုယ်ပိုင်အမှတ်တံဆိပ်ဖွံ့ဖြိုးဒါကြောင့်ငါပျင်းရဖို့အချိန်ရှိသည် don`t ။
Takemyyellowdress သင် 2014 စတင်ခဲ့သည့်သင်၏ပုဂ္ဂိုလ်ရေးစီမံကိန်းဖြစ်ပါတယ်။ သင်သည်အဘယ်သို့ကအကြောင်းငါ့ကိုပြောပြနိုင်မလား? အဘယ်အရာကိုသင့်ကိုယ်ပိုင်လက်ဝတ်ရတနာအမှတ်တံဆိပ်နှင့်အဘယ်သို့ဆိုင်မင်းရဲ့ collection အကြောင်းကိုစိတ်အားဖန်တီးဖို့အတွက်သင့်ကိုလှုံ့ဆော်?
Takemyyellowdress 2014 မွေးဖွားခဲ့သည်။ နှစ်ပေါင်းသတ္တုတွင်း၏မိတ်ဆွေများကကျွန်မအတွေးအခေါ်များအပေါ်လုပ်ကိုင်ဖို့ပြည့်စုံလွတ်လပ်ခွင့်ရှိနိုငျသညျ့အရာတစ်ခုခုကိုဖန်တီးရန်ရှိသည်ငါ့ကိုပြောပြခဲ့ကြသည်။ တစ်စုံတစ်ဦးအတွက်အလုပ်လုပ်ရတဲ့အခါသင်ကလုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များ, အကြီးအကဲတွေ, အရောင်း, ဖက်ရှင်ကဘာလဲဆိုတာနှင့်အရေးကြီးသောအချက်များအပေါငျးတို့သမျိုး၏သြဇာလွှမ်းမိုးမှုအောက်မှာရှိပါတယ်, သင်တို့နှင့်အတူမှတ်ရမည်ဖြစ်သည်။ သင်သည်သင်၏ကိုယ်ပိုင်အမှတ်တံဆိပ်သငျသညျထိုသို့ပြုနိုင်ပါသည်, သို့သော်သင်ချင် don`t လျှင်ရှိသည့်အခါ - သင်လုပ် don`t, အကောင်းဆုံးအရာကသင်ချင်သမျှကိုပြုကြသောကြောင့်ဖြစ်သည်။
ငါသည်ငါ၏နာမကိုအမှီနှင့်အတူဖြစ်မယ့်အမှတ်တံဆိပ်ရှိပါကငါစိတ်ကူးနှင့်အတူအဆင်ပြေခံစားခဲ့ရဖူးဘူးဒါကြောင့်ကျွန်မနာမည်တစ်ခုနှင့်အတူတက်လာခဲ့ကြရသည်။ ငါက "Takemyyellowdress" ဆီသို့ရောက် လာ. , ဒါကြောင့်အတိအကျမူရင်းချည်မှ လာ. ဘယ်မှာငါထားသောစာပိုဒ်တိုများကျွန်တော်အလွန်ငယ်ရွယ်စဉ်အခါသူတို့ကသောကြာနေ့တွင်အဝါရောင်ဝတ်ဆင်ဖို့မကျွန်တော်တို့ကိုပြောပြခဲ့ကြပုံကိုငါ့ကိုသတိပေးထားတဲ့အတွက်သီချင်းတစ်ပုဒ်ထဲကနေစဉ်းစားသေချာမဖြစ်ကြောင်းကို, ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ သူတို့ကစိတ်ကျန်းမာရေးအဖွဲ့အစည်းကနေအရူးကလူမွို့၌လမ်းလျှောက်ယူကြကုန်အံ့။ အဝါရောင်အရောင်အကြောင်း - က .. ဟာရူးသွပ်သူတွေကိုသူတို့အရူးဖြစ်ကြပြီးသိသာကလေးများအဝါရောင် ID ကိုနှင့်အတူအချို့သောထူးဆန်းတဲ့အသင်းအဖွဲ့ပြုပါနှင့်အဝါရောင်ဝတ်စားဆင်ယင်ဖို့တဲ့အထောက်အထားအဖြစ်အဝါရောင်အရောင်အတွက် ID ကိုအချို့မျိုးရှိခြင်းခဲ့ကြသည်ဟူသောအချက်ကိုထံမှလာဒါ Takemyyellowdress wordplay အချို့ကိုမျိုးဖြစ်ပါသည် - ငါ့အရူးသွပ်မှုသို့မဟုတ်ကျွန်ုပ်၏အတွေးအခေါ်များယူ - သငျလိုခငျြသကဲ့သို့သင်တို့နားလည်နိုင်ပါတယ်။
လူတွေနေတဲ့ဒိုင်ယာရီကိုစောင့်ရှောက်ရသောအခါငါ့အဘို့ငါဘို့ပြုသည့် collection များကိုကဲ့သို့ဖြစ်ကြ၏ - ငါလက်ဝတ်ရတနာပါစေ။ Inspiration သင်သာစောင့်ကြည့်လေ့လာရောက်ထားရန်လိုအပ်ပါတယ်, နေရာတိုင်းကနေလာပါတယ်။ အဆိုပါအမှတ်တံဆိပ်ကောင်းကောင်းသွားနဲ့ကျွန်မအနာဂတျမှာကအပေါ်အပြည့်အဝကိုယ့်ကိုယ်ကိုအာရုံစူးစိုက်နိုင်မှမျှော်လင့်ပါတယ်။
အဆိုပါ designer`s လူအားလုံးကပုံကြမ်းကျော်တပြင်လုံးကိုရက်ပေါင်းဖြုန်းသစ်ကို collection များကိုဖန်တီးနဲ့တကယ်တော့သင်သည်အမြဲတစေကမ္ဘာပေါ်မှာနေရာတိုင်းသွားလာနေသည်စိတ်ကူး -most အကြောင်းကိုအလုပ်လုပ်ဘာအကြောင်းကိုအနည်းငယ်ပိုကြှနျုပျတို့နှငျ့အတူဝေမျှမယ်။
အဆိုပါ designer`s အလုပ်ကအမြဲအနုပညာတစ်ခုလှုံ့ဆော်မှုကြောင့်မဆိုအနုပညာကိုစိတ်ဝင်စားဖြစ်မည်ဟု, သင်တို့ပတ်လည်ဖြစ်ပျက်အကြောင်းကြားထားကြောင်းအတွက်ပါဝင်ပါသည်။ စာပေ, ဓာတ်ပုံပညာ, ဗိသုကာ, ပန်းချီ, ဂီတ, ခရီးသွား .. အမှန်တရားအဘယ်သူမျှမကန့်သတ်ရှိပါတယ်ဖြစ်ပါသည်။ ရုံရှင်းလင်းဖို့ - ဤအမှုသည်ငါ့အမြင်ဖြစ်ပါသည်, လူတိုင်းအတွက်သတ္တုတွင်းထိုကဲ့သို့သောဖြစ်ပါသည်, နှစ်ပေါင်းများစွာကသူတို့အလုပ်ကိုဖော်မြူလာတည်ဆောက် - တစ်စိတ်ခံစားမှုကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်တစုံတခုကိုမျှအတော်လေးသဘာဝသငျသညျလာအောင်နှိုးဆွခြင်းနှင့်အရာတစ်ခုခုကိုဖန်တီးရန်သင့်အားပေးတော်မူရန်ဖြစ်ပါသည်။
ငါစီးပွားရေးနှင့်ပျော်မွေ့ခြင်းအဘို့အတွေအများကြီးခရီးသွားလာ။ ကျွန်မသင်တန်းအပျြောအပါး, ပိုနှစ်သက်သော်လည်းငါ့အလုပ်တရုတ်, ကိုရီးယား, ဂျပန်, အိန္ဒိယနှင့်လည်းဥရောပမြို့တော်အတွက်တိုတောင်းကဲ့သို့သောနိုင်ငံများတွင်အတွက်ရှည်လျားသောခရီးမှဆက်စပ်ဖြစ်ပါတယ်။ အစဉ်မပြတ်ငါငါကအားလုံးကိုစုဝေးရောက်လာကြ၏ဒီတော့သူတို့ကိုပေါင်းစပ်ဖို့သင်ယူသည်အထိငါပျော်မွေ့ခရီးစဉ်များအတွက်လုံလောက်သောအချိန်ရှိ don`t ကြောင့်လန့မပြုမီ။
လှုံ့ဆော်မှုတွေအများကြီးဖွင့်အချို့ဒါဝေးလံသောအရပ်ဌာန၌လမ်းများပေါ်တွင်လူပေါင်းစောင့်ကြည့်ကြကုန်အံ့တစ်ဦးတည်း, ထိုလူထုပုံပြင်များ, ယဉ်ကျေးမှု, အနုပညာ, အစားအသောက်မယုံကြည်နိုင်လောက်အောင်စိတ်ဝင်စားဖွယ်ဖြစ်ပါသည်, ခရီးသွားလာအတွက်ရှိပါသည်။ အချိန်ကြာလာတာနဲ့အမျှ, သင်မည်သူမဆိုနှောင့်အယှက်မပေးသည့်ကာလအတွင်းရှည်လျားသောလေယာဉ်၏အားသာချက်ယူလေ့လာပါ။ သငျသညျဖတ်အလုပ်လုပ်သို့မဟုတ်ရိုးရှင်းစွာအရာတစ်ခုခုကိုစဉ်းစားနိုင်ပါတယ်။ ဤသည်သာသင်တို့အဘို့အချိန်ဖြစ်ပြီးလေယာဉ်တွင်ဤနာရီကိုကဲ့သို့သင်တို့ညှိသင်ကိုယ်တိုင်လျှင်, သုံးသို့မဟုတ်လေးထောင်ကီလိုမီတာချည်းနှီးသက်သက်ဖြစ်ကြ၏ပုံရသည်။
စိတ်ကူးများနှင့် ပို. ပင်အရေးကြီးသောရှိသည်ဖို့တစ်ဒီဇိုင်နာကတော့ပုံကြမ်း, ရှေ့ပြေးပုံစံ, စီမံကိန်းများနှင့်လူဒီဇိုင်နာစေသည်စိတ်ကူးအကြမ်းဖျင်းအရာအားလုံးလာထို့နောက်သူတို့အဘို့သတင်းရင်းမြစ်ကိုရှာဖွေသည်အလွန်အရေးကြီးပါသည်။
© Xavi Bou (လက်ဝဲ) | © Anabel Godoy (ညာ)
ဒါဟာအခြားရွေးချယ်စရာနေရာတွေကနေမဟုတ်ဘဲသေချာပေါက်ရုံးကနေအလုပ်လုပ်, ငါ့အချိန်စည်းရုံးနိုင်မှငါ့ကို freedom..the လွတ်လပ်ခွင့်ပေးသည်; တိကျတဲ့လုပ်ရိုးလုပ်စဉ်မပါဘဲနေ့စဉ်ဘဝကလွှမ်းမိုးထားတဲ့အတွေး၏လွတ်လပ်ခွင့်, ။ ငါအလုံအလောက်အလုပ်လုပ်နေတာ wasn`t လျှင်သကဲ့သို့ငါအချိန်သို့မဟုတ်နေရာအရပ်အားဖြင့်ကန့်သတ်ထား wasn`t ငါကိုယ့်ကိုယ်ကိုဖြုန်းသောခံစားချက်ကြောင့်အစပိုင်းမှာငါ, မျက်စိလည်လမ်းပျောက်သလိုခံစားရတယ်။ သို့သော်ဤပြောင်းလဲသွားတယ်။ ငါ့ရှေ့မှာအထဲကနေပြန်ကန့်သတ်မယ့်စိတ်ကူးရန်အဘို့အအခုတော့ခက်ခဲပါတယ်။
accessories များအမျိုးမျိုးဖန်တီးသူတစ်ဦးအလုပ်ရှုပ်ဒီဇိုင်နာ, အပြင်, သငျသညျလညျးအံ့သြဖွယ်သမီး၏မိခင်တစ်ဦးဖြစ်ပါသည်။ သင်သည်သင်၏တွေ့ဆုံမှုထိုကဲ့သို့သောဝန်မှာအောင်မြင်စွာမည်သို့ပေါင်းစပ်သလဲ?
ခက်ခဲနှင့်ငါ့သမီးဆယ်ကျော်သက်အရွယ်၌တည်ရှိ၏ကတည်းက - အတော်လေးခက်ခဲပေမယ့်ငါရှင်သန်ပါလိမ့်မယ်။
အစဉ်မပြတ်ငါအသစ်ကအတွေးအခေါ်များရှိသည်နှင့်ငါတဦးတည်း၏အထင်သောအခါငါအံ့သြလောက်အောင်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်လာအောင်နှိုးဆွသောကွောငျ့ကြှနျတေျာ့ရည်မှန်းချက်များကိုတစ်နည်းနည်းဖရိုဖရဲဖြစ်ကြသည်။ ငါသညျဤအစဉ်အမြဲဒီတော့ဆက်လက်တည်ရှိမည်, ဒီတော့ငါအနာဂတ်မသိမှန်းငါအရမ်းဒီအယူအဆကိုကြိုက်နှစ်သက်ထင်ပါတယ်။ ငါမဝေးတော့တဲ့အနာဂတ်မှာအကြောင်းပြောဆိုရန်ရှိပါကဒါပေမယ့်အခုဇွန်လ 2016 အတွက်တင်ပြပါလိမ့်မည်သည့် Takemyyellowdress အသစ်တစ်ခုစုဆောင်းခြင်း, အလုပ်လုပ်နေပါတယ်။
ငါအောင်မြင်မှုအကြှနျုပျအဘို့အဘယ်အရာစဉ်းစားဖူးဘူး။ အနုပညာနှင့်အတူဆကျဆံသောလူတစ်ဦးငါသည်လည်းငါ၏အမှုကလူလာအောင်နှိုးဆွချင်သကဲ့သို့ငါမှန်းဆ။ သို့သော်လည်းငါသည်လည်းအောင်မြင်မှုစိတ်ပုဂ္ဂိုလ်ရေးပြည်နယ်ကဲ့သို့ဖြစ်၏ထင် - သင်ယခုဖြစ်ကြပြီးဘယ်လောက်သင်သည်သင်၏အသက်တာကိုအသက်ရှင်နေထိုင်ရှိရာအတူ OK ကိုဖြစ်။
Tsveta Trendafilova အကြောင်းပိုမိုလေ့လာပါ:
Facebook ပေါ်မှာ Takemyyellowdress
Instagram ကိုအပေါ် Takemyyellowdress
အတတ်ပညာ, ဘာစီလိုနာ, ပုံစံ, ရတနာ | | rating:5/ 30